Candy manorotoro Level 136 hosoka sy toro-hevitra - Lalao famoronana Candy - Free Lives Tips Cheats Soso-kevitra
Eto ianao: an-trano / Uncategorized / Candy manorotoro Level 136 hosoka sy toro-hevitra
Nohavaozina farany tamin'ny Jolay 23, 2021 ny Isobella Franks Mametraha hevitra
Mahatsapa ve ianao fa kely kokoa ny lokon'ny fiainanao?? Ilaina ve ny manampy loko amin'ny fiainanao? Ka raha tsapanao izany dia voalohany angamba ianao mbola tsy nilalao bonbon vatomamy. Ity dia lalao vatomamy miloko. Ny sasany amin'izy ireo dia soratana, ny sasany fonosina ary ny sasany vatomamy tsotra fotsiny. Tsy maintsy potehinao ireo vatomamy ireo mba hahatratra ambaratonga vaovao. Tsy mahaliana ve izany?
Mahaliana ny olona milalao ity lalao ity. Na izany aza, ny tsy tian'izy ireo dia ny fijanonany amin'ny ambaratonga sasany. Noterena hikoropaka ianao amin'ny Level Candy Crush 136. Ny antony maha-sehatra sarotra azy io dia mila fivezivezena mety. Ahoana raha afaka manampy anao amin'ity ambaratonga ity izahay? Hahafaly anao ve izany? Arak'izany, Fantatro fa hisy izany, koa eto izahay mitondra anao Candy manorotoro Level 136 hosoka sy toro-hevitra.
Heverina ho ambaratonga sarotra satria mila fahasarotana vitsivitsy vao voavaha. Ho fanampin'izany, amin'ity ambaratonga ity, tsy maintsy manangona fonosana miampy vatomamy mifono ianao. Toy izany koa, tsy maintsy manangona vatomamy nesorina koa ianao. Miaraka amin'ireo roa ireo, mila mahazo baomba miloko ianao. Mifanaraka amin'izany dia tokony hahazo isa farafaharatsiny ianao 30,000 teboka ary izany rehetra izany dia tsy maintsy atao ao 40 moves. Tsy asa sarotra ve izany? Tsy dia izany loatra, raha manaraka ny toro-hevitray sy ny fika ianao dia ho afaka hanadio ity ambaratonga ity indray mandeha.
Try to make moves lower on the board as this will help in keeping chocolate at bay. Ary, it will also help you to make special combos which in return will bring down more candies. Toy izany koa, you should focus on combining two wrapped candies because it is the hardest part of this level.
As per special candies are concerned, focus on making the right ones. Comparatively, it is difficult to make these special candies next to each other so don’t move them together. Ideally, zava-dehibe ho an'ity haavo ity ny fandaharanao ny dianao alohan'ny fotoana.
Mitandrema amin'ny fampiasana ny vatomamy manokana mba hamenoana ny kaomandy vatomamy miloko. Ary noho izany, Ny baomba baomba dia mety ho hevitra tsara fa manampy amin'ny fanalana ireo vatomamy. Izany dia hanampy anao hamorona fotoana bebe kokoa hahafahana manao hetsika tsara kokoa eny amin'ny solaitrabe
Soso-kevitra farany iray ny drafitra ny lalao. Ny fihetsika rehetra dia tokony hiaraha-miasa. Ny fifantohanao dia tokony hijanona amin'ny fanatratrarana ny tanjona farany ao anatin'ny hetsika voalaza. Jereo hatrany ny scoreline-nao. Hanampy foana izany.